Nanambara ny fanitsakitsahana ny tetikasan'ny fizahantany ao La Digue ny governemanta
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Nanambara ny fanitsakitsahana ny tetikasan'ny fizahantany ao La Digue ny governemanta
Ny fiatoana tanteraka amin'ny tetikasam-pampandrosoana fizahantany vaovao dia hanomboka amin'ny 1 Aogositra 2021, hatramin'ny 2023 satria ilaina ny fepetra haingana hiarovana ny La Digue amin'ny fampandrosoana be loatra ary hitehirizana ny fomba fiainany.
Ny fahitana ny fanadihadiana momba ny fahaiza-mitondra ho an'ny La Digue natao tamin'ny 2019-21 dia nambara androany.
Ny fandinihana dia nomena andraikitra hametraka ny satan'ny fampandrosoana any amin'ny nosy ankehitriny.
Izy io koa dia manome tolo-kevitra hitarihana ny governemanta amin'ny famolavolana politika hitantanana ny fitomboan'ny fizahan-tany ary hahatrarana ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra ao amin'ilay nosy kely.
Ny departemantan'ny fizahantany dia nanao fanambarana tamin'ny alatsinainy 26 jolay, tamin'ny fivoriana izay notanterahin'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny departemanta miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny La Digue mba hilazana ny valin'ny fanadihadiana Carrying Capacity Study ho an'ny La Digue natao tao amin'ny 2019-21.
Ny fandinihana izay notontosain'ny orinasam-pakan-kevitra mahaleo tena, Sustainable Travel International, dia nodidiana hametraka ny satan'ny fampandrosoana ankehitriny ao amin'ny nosy ary koa hanome tolo-kevitra hitarihana ny governemanta amin'ny famolavolana politika hitantanana ny fitomboan'ny fizahan-tany ary hahatratra ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra ao amin'ilay nosy kely.
La Digue, iray amin'ireo sary mahafinaritra indrindra ny nosy Seychelles niaraka tamin'ny fomba fiaina milamina, havoana granita miavaka ary iray amin'ireo morontsiraka nalaina sary indrindra eran'izao tontolo izao, no nankasitrahana tamin'ny taona 2019, mpitsidika 17,868 alina tao amin'ny trano fonenana 658 teo amin'ny nosy.
Ny valim-panadihadiana dia nanapa-kevitra fa ilaina ny famerenan'ny departemanta ireo tetik'asa fampandrosoana ao amin'ny nosy, Ramatoa Bernice Senaratne, ny talen'ny politika, fikarohana, fanaraha-maso ary fanombanana ao amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany, hoy ny fihaonambe, izay saika avy amin'ny Ny foiben'ny departemanta ao amin'ny Botanical House izay nanatrehan'ny minisitry ny raharaham-bahiny sy fizahan-tany, Andriamatoa Sylvestre Radegonde, ny sekretera lehiben'ny fizahantany, Ramatoa Sherin Francis ary ny talen'ny Sinha Levkovic ho an'ny fampandrosoana ny vokatra ny alatsinainy teo.
Na dia atao aza ity fanazaran-tena ity, manomboka amin'ny 1 Aogositra dia hisy fiatoana tanteraka ho an'ny rehetra tetik'asa fampandrosoana ny fizahantany amin'ny nosy hatramin'ny taona 2023 satria ilaina ny fepetra maika hiarovana ny nosy na mandra-pahatongan'ny mpitsidika sy ny toerana onenany dia miverina ny isa. Ity moratorium ity dia mitranga amin'ny fampivoarana bebe kokoa ireo fotodrafitrasa ilaina amin'ny famokarana ilaina toy ny rano, herinaratra ary ny maloto izay hamaly ny fitomboan'ny indostria.
Ny filana mamolavola drafitra fanarenana hamaritana ny làlan'ny fanarenana raha jerena ny fiantraikan'ny fizahan-tany amin'ny nosy sy ny harinkarem-pirenena, ary amin'ny orinasa sy ny mponina, dia manakiana, ny fanasongadinana.
Tolo-kevitra lehibe amin'ny Fandinihana mitondra ny fahaiza-manao 2019-2020 ho an'ny La Digue dia misy: